क्रान्ति, नयाँ र सशक्त ढंगले अगाडि बढ्छ : प्रकाण्ड, प्रवक्ता– नेकपा (माओवादी) – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७३ फाल्गुन १०, मंगलवार) ०२:११
० जनयुद्ध दिवसकै अवसर पारेर पार्टीको महाधिवेशन आयोजना गर्नु भएको छ, कारण के हो ?
फागुन १ गते नेपालको सर्वहारावर्ग र शोषित, पीडित जनताको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति एउटा ऐतिहासिक दिन हो । सामान्यतः सुगौली सन्धिदेखि यता पराधीनताको पर्खालमा घेरिएको हाम्रो राष्ट्रियता सन् १९५० देखि अहिलेसम्म अर्थात् प्रचण्डको मोदीसँग भएको २५ बुँदे सहमतिसम्म आउँदा डरलाग्दो घातमा परेको छ । त्यसकारण यो राष्ट्रको सम्पूर्ण मुक्तिका निम्ति नेपाली जनताले आफ्नै पार्टी अर्थात् तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको दिन हो ।
फागुन १ यस्तो दिन हो, नेपालमा सबै शोषित, पीडित जनताले आफ्नो मुक्ति निम्ति, आफ्नो राज्यसत्ताको निम्ति, आफ्नो शासन व्यवस्थाको निम्ति, समृद्ध नेपालको निर्माणको निम्ति राज्यसत्ताका विरुद्धमा धावा बोलेको दिन हो । त्यसकारण नेपाली क्रान्तिको सद्भाव र नेपालको राष्ट्रिय मुक्तिको सन्दर्भमा फागुन १ गते भनेको ऐतिहासिक दिन हो । यस कारण हामीले फागुन १ गतेलाई रोजेका हौँ । अर्को, फागुन १ गते नेपाली जनताको महान् पर्व पनि हो । पछिल्लो समयमा नेताहरूले नै गद्दारी गरे, धोखा दिए र विचलित भएर मात्र हो, नत्र फागुन १ गतेलाई नेपाली जनताको महान् सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका थियौँ र हामीले स्थापित गर्दै पनि आएका थियौँ । त्यस अर्थमा पनि हामीले फागुन १ गतेलाई रोजेका हौँ । अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशन आफैँमा महान् र ऐतिहासिक छ । यो क्रान्तिकारी पार्टीको महाधिवेशन हो ।
क्रान्तिकारी पार्टीको महाधिवेशन नेपाली राजनीति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा आवश्यकता भन्नुस् या संयोग हाम्रै पार्टीले आयोजना गर्नुपर्ने भयो । त्यसको सम्पन्नता हाम्रै पार्टीले गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसकारण यो ऐतिहासिक कार्यको निम्ति पनि हामीले फागुन १ लाई रोजेका हौँ । फागुन १ गते सुरु भएको क्रान्तिमा नेपालका झण्डै १० हजार सहिदहरूले आफ्नो रगत बगाउनु भएको छ । पार्टीको र म आफ्नोतर्फबाट यो दिनको स्मरण गर्दै सहिदहरुप्रति श्रद्धाभावका साथ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । हामीसँग हजारौँ घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता साथीहरू हुनुहुन्छ । बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गहरूको सम्मान गर्दै स्मरण गर्न चाहन्छु । र, यो दिनलाई नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा फेरि पनि ऐतिहासिक बनाएर लैजाने पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
० महाधिवेशन उद्घाटन समारोह काठमाडौँमा गर्ने र बन्दसत्र रोल्पाको थवाङमा गर्ने कार्यक्रम रहेछ, कतै फेरि पनि जनयुद्धकै संकेत गर्न खोजेको त होइन ?
क्रान्तिको प्रवृत्तिको दृष्टिले त त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ । तर, यो त हामीले २०७३ सालको फागुन १ मा गर्दैछौँ । महाधिवेशनलाई यसो गर्न हामीलाई हाम्रो कार्यदिशा, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाले गाइड गरेको छ । काठमाडौँमा हजारौँ जनताको सामुमा उद्घाटन समारोह गर्नुस् र नेपालको क्रान्ति, जनयुद्धको केन्द्रबिन्दु थवाङमा जनताको माया, जनताको व्यवस्थापन, जनताको सुरक्षामा बन्दसत्र गर्नुस् भन्ने हाम्रो कार्यदिशाले निर्देश गरेको छ । यस अर्थमा हामीले घोषणासभा काठमाडौँमा तय ग¥यौँ भने बन्दसत्र थवाङमा गर्ने भयौँ ।
हामीले चाहेको क्रान्ति हो । यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने सहरमा पनि राजधानी भनिने सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विगतमा एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको रोल्पाको थवाङ थियो, यी दुईवटैलाई अबको क्रान्तिमा जोड्न हाम्रो विचार, नीति, आकांक्षा र व्यवहारलाई व्यक्त गर्न पनि हामीले काठमाडौँमा घोषणासभा र थवाङमा बन्दसत्र गर्न लागेका हौँ ।
० देशमा एकपछि अर्को राष्ट्रघात भइरहेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ, पछिल्लो समयमा एयर मार्सलको विषयले पनि हंगामा मच्चाएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
० तपाईं संघर्षका मोर्चा बनाउने कुरा गर्नु हुन्छ तर तपाईंहरूको कामकारवाहीमाथि निगरानी राख्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत पुगिसकेको प्रचारमा आएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
० महाधिवेशनमा पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ, वास्तविकता के हो ?
अहिलेको हाम्रो महाधिवेशन ऐतिहासिक र महान् हुन्छ । किनभन्दा नेपाली क्रान्तिको पछिल्लो चरणमा हामी नयाँ चरण र भिन्न चरणमा छौँ । हाम्रो क्रान्तिलाई र नेपाली समाजलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति हामीलाई विचार नयाँ चाहिएको छ, नीति नयाँ चाहिएको छ । पार्टी संगठन नयाँ चाहिएको छ, कार्यक्रम नयाँ चाहिएको छ । हामीलाई अहिलेको विश्वको नयाँ संश्लेषण चाहिएको छ । पहिलो कुरा, हाम्रो महाधिवेशन विचार विकास गर्ने महाधिवेशन हुनेछ । दोस्रो कुरा, हामीले अबको विश्व साम्राज्यवादको नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्नुछ । आजभन्दा एक सय वर्ष अगाडि लेनिनले संश्लेषण गर्नुभएको थियो । जसलाई साम्राज्यवाद र पुँजीवादको उच्चतम र मरणासन्न चरण भन्नुभयो । लेनिनले त्यो विश्लेषण गरिसकेपछि सर्वहारा क्रान्तिको र समाजवादी क्रान्तिको चरित्रमा गुणात्मक विकास भएको थियो । यो विश्लेषण गरेको एक सय वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यसैले अहिले हामी विश्वको नयाँ विश्लेषण गरेर नयाँ निष्कर्ष निकाल्दैछौँ ।
अहिलेको साम्राज्यवाद, पुँजीवादलाई उत्तरसाम्राज्यवाद भन्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावित पनि गरेका छौँ । विश्व पुँजीवादविरुद्ध, विश्व साम्राज्यवादका विरुद्धमा सर्वहारावर्गको राजनीतिक कार्यक्रम के हुन्छ ? समाजवाद हिजो किन फेल भयो ? भन्नेमा पनि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्दै छौँ । विश्व पुँजीवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धमा सर्वहारावर्गको, सबै श्रमजीवि, उत्पीडित जनताको राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा, सत्ता र व्यवस्थाको रूपमा वैज्ञानिक समाजवादलाई विश्वव्यापीरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यो नै अहिलेको सही कार्यक्रम हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दैछौँ । अर्को कुरा, हामी स्टालिनको नयाँ मूल्यांकन गर्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि हामी नयाँ संश्लेषण गर्दैछौँ । हामी उत्पीडित जातिको सन्दर्भमा पनि नयाँ नीति लिँदैछौँ र पार्टीको बारेमा पनि हामीले नयाँ निर्णय लिँदैछौँ । पार्टीको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ ।
रणनैतिक कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विश्वको सर्वहारावर्ग र सबै उत्पीडित जनता र राष्ट्रको पार्टी हो । कम्युनिस्ट पार्टी विभागजस्तो हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ब्राञ्च (शाखा) हो । त्यसैले विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ब्राञ्चको रूपमा हामीले यसलाई लैजान खोजेका हौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर हामीले महाधवेशनमा पार्टीको नाम प्रस्तावित गरेका छौँ । दोस्रो कु्रा, नेपालमा पछिल्लो समयमा एउटा माओवादीले जनतालाई धोखा दिने, क्रान्तिलाई बिसर्जित गर्ने, दलाल पुँजीवादको टाङमा छिर्ने देखिएकोछ, जसको असर इमानदार माओवादी पार्टीलाई पर्ने गरेको छ । यसलाई क्रस गर्न पनि हामीले पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ राख्न खोजेका हौँ । हाम्रो यो कम्युनिष्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित हुन नदिन चाहे संशोधनवाद भन्नुस् या चाहे नवसंशोधनवाद भन्नुस्, चाहे पुँजीवादीहरू भन्नुस् सबै लागिपरेका छन् । यसलाई क्रस गरेर जनताको पार्टी, सजिलो ढङ्गले जनताले बुझ्न सक्ने, पहिचान गर्न सक्ने, सम्झन सक्ने हिसाबले हामीले महाधिवेशनमा पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ राख्न प्रस्तावित गरेका छौँ र महाधिवेशनबाट फैसला गर्छौं ।
० नेपाली क्रान्तिको उद्गम थलो थवाङबाट पुनः क्रान्तिले जन्म लिन थालेको हो ?
० थवाङबाट फर्कंदा पार्टी अझै दरिलो भएर फर्कने त निश्चित नै देखियो । अब देश र जनताले मुक्तिचाहिँ कहिले पाउँछन् त ?
(२०७३ फाल्गुन १०, मंगलवार) ०२:११ मा प्रकाशित